Warar is khilaafsan oo kasoo baxaya rasaas laga maqlay hoyga lagu hayo Mukhtaar Rooboow.
Wednesday April 15, 2020 - 11:39:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Rasaas xooggan ayaa xalay fiidkii laga maqlay guri kuyaal meel ku dhow madaxtooyada Villa Somalia halkaas oo uu ku xiranyahay Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in rasaasta ay is dhaafsadeen ciidamo kuwada tirsan sirdoonka dowladda Federaalka islamarkaana qaabilsanaa ilaalada Rooboow, ugu yaraan hal askari ayaa tacshiiradda ku dhintay halka kuwa kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Saraakiil katirsan Nabad sugidda qaabilsan ilaalinta Mukhtaar Rooboow ayaa xaqiijiyay dhimashada mid kamida ciidamadii ilaalada ka hayay albaabka guriga, toogashada ayaa la sheegay in uu geystay askari kale oo markii dambe laxiray sida warka loo dhigay.
Mugdi badan ayaa ku jira qaabkii ay xalay wax uga dhaceen halkii uu ku sugnaa Rooboow wararka qaar ayaa sheegaya in lafashiliyay isku day uu siyaasigan uga baxsan lahaa xabsi guriga lageliyay halka warar kale ay sheegayaan in saraakiishii qaabilsanaa ilaalintiisa ay is khilaafeen.
Mukhtaar Rooboow oo kamid ahaa musharrixiintii iskusoo taagay xilka madaxweynanimo ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddo sanad kabadan qaab siyaasadaysan ugu xiran magaalada Muqdisho waxaana fashilmay dadaallo ladoonayay in lagusii daayo.